Creative Manager NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ကို Creative Manager ကို
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ကို Creative Manager ကို
ရာထူး: ကို Creative Manager ကို
နွယ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, Novi, မစ်ရှီဂန်အခြေစိုက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ, အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးထုတ်လုပ်ရန်နှင့်နွယ်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ high-သက်ရောက်မှု, ဖြေရှင်းချက်-oriented ကို Creative Manager ကိုရှာတတ်၏။ ပါဝင်သည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးများ: ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ယုံကြည်မှု, လေးစားမှု, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်သည်ခေါင်းဆောင်မှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီဦးတည်သွားစေခြင်းနှင့်ကော်ပိုရိတ်အောင်မြင်မှု။
အဆိုပါကို Creative Manager ကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက်အဖှဲ့အစညျး၏ 100 + တစ်နိုင်ငံလုံးအဆောက်အဦကိုဖြတ်ပြီးဆက်သွယ်ရေး၏မဟာဗျူဟာမြောက်, ဆန်းသစ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကို Creative Manager ကိုလည်းလိမ့်မည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ပြောင်းလဲနေသောပစ္စည်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများထုတ်လုပ်ရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်လျှောက်လုံးအသင်းများနှင့်အတူမိတ်ဖက်။
အဆိုပါကို Creative Manager ကိုစပိုင်းတွင်အာရုံနှစ်ခုအဓိကဒေသများရှိပါလိမ့်မယ်:
ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်မျိုးရိုးရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာနှင့် Multi-တစ်နှစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်အပေါ် execute
အဆိုပါကို Creative Manager ၏တာဝန်များပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မဟုတျပါ:
စျေးကွက်အပေါင်ပစ္စည်း, အရောင်းပစ္စည်းများ, ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲပြသမှုနှင့်အခြားပုံနှိပ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးလုံးမှတဆင့်စည်းရုံးရေးအစပျိုးခြင်းနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းပတျဝနျးကငျြပြည်တွင်းရေးစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများ Conceptualize နှင့် execute
Cross-functional ဖြစ်စေအဖွဲ့များအပေါ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်ထောက်ခံမှုအတွက်အဖှဲ့အစညျး၏မဟာဗျူဟာမြောက်ဦးစားပေးဖန်တီးမှုပစ္စည်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါပြည်တွင်းရေး client များအစေခံ
ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, SharePoint, လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်မိုဘိုင်း application များ / dashboards ကဲ့သို့ချန်နယ်အပေါ်ဖန်တီးမှုခဲကဲ့သို့အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်
အဆိုပါအောင်မြင်သောကို Creative Manager ကိုအောက်ပါအရည်အချင်းများအပိုင်တွေနဲ့ attribute ပါလိမ့်မယ်:
အလားတူအခန်းကဏ္ဍအတွက်သက်ဆိုင်ရာ, လက်-အပေါ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး5နှစ်ပေါင်း
စသည်တို့အတွက် Microsoft Office ကို, Adobe က Photoshop ကို, Illustrator, InDesign, အတူကျွမ်းကျင်မှု .; SharePoint အတွေ့အကြုံကိုတစ်ပေါင်းဖြစ်ပါသည်
မျိုးစုံအသုံးပြုမှုကိစ္စများတွင်၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်သက်ဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အားကြီးသောအလုပ်လုပ်အသိပညာနှင့်နားလည်မှု
, ဖန်တီးမှုဆန်းသစ်နှင့် Impact စိတ်ကူးများနှင့်ဒီဇိုင်းများအတွက်တစ်ဦးကစိတ်အားထက်သန်မှု
ပြီးစီးမှတဆင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများကို-တာဝန် Multi မှသရုပ်ပြစွမ်းရည်
အစာရှောင်ရာ-ပွေးညီ, အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆင်ပြေသောသူတစ်ဦးမြင့်မား-လှုံ့ဆော်မှု, အမြန်-သင်ယူခြင်း Self-starter Be
လျှောက်ထားရန်အဆင်သင့်မဟုတ်လော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Talent: ကွန်ယက် join ။ ဒီအလုပ်လျှောက်ထားမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ လျှောက်ထားရန်, သငျသညျစတငျဖို့အောက်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါရပါမည်။
ယခင်: Software များအင်ဂျင်နီယာငါ
နောက်တစ်ခု: မန်နေဂျာကို Creative န်ဆောင်မှုများ